Nezvedu - 3L Tex Co, Ltd.
3L Tex Co, Ltd. yakavambwa muna2009, inogadzira inogadzira yehunyanzvi / yakapusa shinda & machira.
Nenhamba huru yezvigadzirwa zvemhando yepamusoro yezvigadzirwa uye zvigadzirwa zvehunyanzvi, zvigadzirwa zvehunyanzvi zvemberi uye zvekuyedza zvefibre kumonyanisa, kufukidza, kupfeka, machira emachira kuruka kuruka nezvimwe isu takatsvaga mukutsvagisa, kugadzira, kuburitsa, kugadzirisa shinda, machira, machira akagadzirwa sirivheri faibha, simbi isina simbi faibha, FeCrAl, aramid, tinned coper, girazi faibha nezvimwe neboka revakagadzika yepamusoro mhando yekugadzira manejimendi vashandi uye vane hunyanzvi hwekugadzira tekinoroji musana, isu tinoona kuti tekinoroji yedu uye chigadzirwa chitsva chiri kuwedzera kukwana.
Yedu yehunyanzvi machira anokwanisa kushandiswa zvakanyanya muzvipfeko zvekudzivirira uye machira, inodzivirira, yakanyanya tembiricha, kupisa, kudziya kwakapisa, mota maindasitiri, girazi indasitiri, mauto, zvekurapa, marobhoti, nzvimbo yekutenderera, uye tambo yeindasitiri uye yakakosha waya uye tambo yekushandisa.
Kambani manejimendi uye mainjiniya anogara achitarisa pane zvigadzirwa zvigadzirwa uye kugadziridza kwemhando yepamusoro izvo zvinoramba zvichisanganisira izvo zvinodiwa nevatengi vedu, saka inogona kugadzira uye kugadzira zvigadzirwa zvakasarudzika zvinoenderana nechikumbiro chakakosha chevatengi uye neminda yakakosha yekushandisa.
3L Tex inotora zvinodiwa nevatengi kunyatso kudzora nhanho dzese dzekugadzira uye maitiro ekuongorora, uye nekupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro nemasevhisi seyayo mutoro!
technical shinda uye shinda
Yakakwira temp isingagadzirise mhinduro
simbi fiber jira
simbi faibha matepi / Sleeve
kevlar tubing / sleeve